उहाँले तिमीसँग गर्दा मज्जै अाउँदैन भन्नुहुन्छ ! - Everest Dainik - News from Nepal
उहाँले तिमीसँग गर्दा मज्जै अाउँदैन भन्नुहुन्छ !
म २८ वर्षीया महिला हुँ । मेरो दुई वर्षको छोरा छ । बच्चा पाउनुअघि श्रीमानले सेक्स गर्दा कुनै गुनासो गर्नु हुँदैनथ्यो । अहिले ‘तिमीसँग सम्पर्क गर्दा मजा नै आउँदैन’ भन्नुहुन्छ । उहाँ तनावग्रस्त हुनुहुन्छ । मैले श्रीमानलाई कसरी सम्झाउने होला ? योनी टाइट पार्ने कुनै उपाय छ कि ?
याे पनि पढ्नुस किशोरकिशोरीको सेक्ससम्बन्धी यस्तो छ रोचक तथ्य
याे पनि पढ्नुस सेक्स गर्दा यी कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस्
याे पनि पढ्नुस महिनावारी हुँदा कसरी यौन सम्पर्क गर्ने ? प्रत्येक पुरुषले ख्याल गर्नु पर्ने १० प्रयोगहरु